‘सरकारले सिधै उद्योगलाई काठ दियोस्, फर्निचरको मूल्यमा ३०–४० प्रतिशत कमी आउँछ, आयात पनि घट्छ’ |
‘सरकारले सिधै उद्योगलाई काठ दियोस्, फर्निचरको मूल्यमा ३०–४० प्रतिशत कमी आउँछ, आयात पनि घट्छ’
कर्पोरेट नेपाल , २९ भाद्र २०७६, आईतवार ३१ भाद्र २०७६, मंगलवार
राजधानी जारी यस बर्षको फर्निचर तथा फर्निसिङ मेला आइतबार सकिँदैछ । पछिल्लो समयमा नेपाली फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगहरु सबल र सक्षम हुँदै गएका छन् । नेपालमै यस्ता गुणस्तरीय उत्पादन बढ्दा आयातको रेसियो पनि कम हुँदै गएको छ । यद्यपि फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगका लागि सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार शारदा बताउँछन् । सरकारले सहयोग गर्ने हो भने आयातलाई अझै घटाउन सकिने उनको विश्वास छ । प्रस्तुत छ शारदासँगको संक्षिप्त कुराकानीको सारः
यसअघिका मेला र यस पटकको मेलामा फरक के छ ? प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
हामीले सन् २०१२ देखि यो मेलाको सुरुवात गरेको हो । सुरुमा मै नै संयोजक भएर, म र मेरो अध्यक्ष कृष्णलाल प्रधानले सुरुवात गरेको हो । त्यो बेलामा धेरै कठिनाई थियो । फर्निचर र फर्निसिङको एउटा मेरा हुनैपर्छ, यस क्षेत्रको विकासको लागि भनेर । कारण के भने त्यो बेलामा चिनियाँ सामानको निकै बिगबिगी थियो । मानिसलाई नेपालमा बनेका फर्निचरहरुको बारेमा जानकारी दिनैपर्ने जरुरी थियो । चीनबाट आउने चिल्ला फर्निचरहरु हेर्दा खेरी निकै राम्रो, तर गुणस्तर हेर्दा खेरी निकै राम्रो, तर गुणस्तर छैन् । सस्तो तर गुणस्तर छैन् । त्यो भएकोले मेला गर्ने सोच हामीले बनायौं । मेलाले गर्न थालेपछि उपभोक्ताहरुलाई हामीले धेरै कुरा बुझाउन सकेका छौं । नेपाली फर्निचर तथा फर्निसिङ सामान १०–२० प्रतिशत महंगो छ । तर किन महंगो छ ? भन्ने कुरा उपभोक्तालाई स्पष्ट पार्नु, उहाँहरुलाई विश्वास दिलाउनु व्यवसायी भएको हिसावले हामीहरुको पनि काम हो । महंगो हुनुको कारण काठको गुणस्तर हो । चिनियाँ फर्निचरहरु कुकाठले बनेको हुन्छ । तर हेर्नमा चिल्लो देखिन्छ । तर टिक्दैन् । यहाँ नेपालमा बनेको फर्निचर सोलिड काठले बन्ने हो जुन दशौं बर्षसम्म टिक्छ । २०–३० बर्षसम्म टिक्छ । ५० बर्ष पनि टिक्छ । तर हेर्नमा राम्रो चिनियाँ फर्निचर २–३ बर्ष पनि टिक्दैन् । सोही कारण आज फर्निचर मेलामा चिनियाँ फर्निचर नगन्य मात्रामा मात्रै छ । स्वदेशी फर्निचरले नै बजार लिँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण हो हामीले सुरु गरेको फर्निचर मेला । उपभोक्ताले पनि अनुभवका आधारमा बुझिसक्नुभयो ।
अहिले स्वदेशी फर्निचरको बजार कति छ ?
फर्निचर लाइनमा के भइरहेको छ भने हामीले काठ पाइरहेको छैन् । सहमिलले काठ किन्छ । सहमिलबाट फर्निचर उद्योगले किन्नु परेको छ । यो विषयमा वन मन्त्रीसँग पनि धेरै कुरा हुँदा खेरी पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । फर्निचर उद्योगलाई सहमिलमार्फत होइन्, छुट्टै काठ दिनुपर्छ । किनभने सहमिलवालाहरु मिलेर जुन काठको लिलामी हुन्छ, मिलेर काठ किन्छ । त्यो काठ उनीहरुले चिरान गरेर मात्रै बेच्छ । मानिलिनुस उनीहरुले तीनसयमा लिएको काठ हामीलाई छ सयमा बेच्छ । सिण्डिकेट छ । वन विभागले सिधै हामीले काठ नदिने हुँदा त्यसको मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि हामी जुधिरहेका छौं । केही समयअघि पनि वन मन्त्रीसँग कुरा हुँदा हामीले फर्निचरको कारखाना राखेर काम गरेकाहरुलाई सिधै काठ दिने व्यवस्था मिलाउनुस् । उपभोक्तालाई सस्तो पर्न जान्छ । चिनियाँ आयात कम हुन्छ ।
तपाईंहरुलाई वन विभागले सिधै काठ दियो भने उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिनुहुन्छ ?
सिधै काठ आयो भने स्वाभाविकरुपमा २०–३० प्रतिशत सस्तो पर्न जान्छ । त्यसमा पनि अझै हामी प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छौं । आयातलाई नै निरुत्साहित गर्न सकिएन भने त हामी नै कसरी सर्भाइभ गर्ने ? भन्ने कुरा हुन्छ । सर्भाइभका लागि हामै होइन्, उपभोक्ताको हितका लागि र देशको हितका लागि पनि हामीलाई सिधै फर्निचर उद्योथलाई काठ दिनुस् । ३०–४० प्रतिशतसम्म मूल्यमा फरक पर्नसक्–४० प्रतिशतसम्म मूल्यमा फरक पर्नसक्छ । तर अझै पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन् । सहमिल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर उनीहरुलाई मात्रै किन दिने ? फर्निचर उद्योगलाई किन नदिने ? सरकारसँग यसको जवाफ छैन् । सहमिलहरुलाई चाहीं नदियोस भनेको होइन् । उनीहरुले पनि घर बनाउने खापाहरु बनाउँछ । झ्याल, ढोका बनाउँछ । तर फर्निचर नभई कुनै घर, अफिस पनि त चल्दैन् । यसको निकै ठूलो माग पनि छ । बढ्दै गएको छ । गुणस्तरीय फर्निचरको माग बढ्दो छ । त्यसका लागि वनबाट काठ पाउनुपर्यो । त्यसका लागि हामी लडिरहेका छौं ।
तपाईंले आयात घटाउने कुरा पनि गर्नुभयो । कति छ आयात ? स्वदेशी उत्पादन कति छ ?
अहिले त फर्निचर मात्रै होइन्, काठ पनि आयात भइरहेको छ । अहिले हामी ६०ः४० को रेन्जमा होला । स्वदेशी फर्निचरको बजार ६० प्रतिशतमा आइसकेको छ । ४० प्रतिशत आयातलाई पनि घटाउन हामीलाई कच्चा पदार्थ चाहिएको छ । हामीले चाइनिज, मलेसियन, ब्राजिललगायतका मुलुकबाट फर्निचर आइरहेका छन्, उनीहरुलाई उछिन्दैछौं । उपभोक्ताले पनि बुझिरहेको छ नयाँ नयाँ के भइरहेको छ ? भनेर ।
भनेपछि तपाईंहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फर्निचरहरु बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ ?
एकदम । एकदम । हामीले बनाईरहेका छौं । मानिसहरुको चाहना र मागअनुसार जस्तो भन्यो त्यस्तै गुणस्तरीय फर्निचर र फर्निसिङका उत्पादनहरु बनाइरहेका छौं । त्यही भएर त हाम्रो बजार ६० प्रतिशत पुगेको छ । अब कार्पेटहरु राम्रो राम्रो स्वदेशमै बनिरहेको छ । नयाँ पनि आउनेवाला छन् ।
एकै दिनमा २४ हजारले अवलोकन गरे फर्निचर एक्स्पो, आज अन्तिम दिन
बनेपाबाट घुस लिएको आरोपमा मालपोतका एक कर्मचारी पक्राउ
म्याग्दीमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोवार ठप्प, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या
विराटनगर लाँदै गरेको एक ट्याङ्कर इन्धन चोरी भएको खुलासा
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको खरो प्रस्तुती, विभागीय प्रमुखलाई हटाउने चेतावनी